समाचारमा तपाईं हजुर कति उपयुक्त ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more समाचारमा तपाईं हजुर कति उपयुक्त ?
अशोज ३० गते, २०७६ - १२:३४
काठमाडाैं । ठूला मान्छेलाई “तिमी” भने भनेर अर्को कथा प्रादुर्भाव भएछ। तर मैले आजसम्म पत्रपत्रिकामा “तिमी” चाहिँ पढेको छैन, सुनेको पनि छैन! “उनी” चाहिँ देखेसुनेको हो। खास गरी क्रियापदमा बहुवचन मार्काको “भने”, “गरे”, “भन्छन्”, “गर्छन्” आदि चाहिँ प्रशस्तै देखिन्छ। नेपाली भाषाको सामान्य ज्ञान हुने मान्छेले यसलाई आपत्ति गर्दैन। मान जनाउने क्रियापद नेपालीमा दुई प्रकारका छन्।
१. संयुक्त क्रियापद : संयुक्त क्रियापद प्रयोग हुँदा क्रियापदको कर्तासँग अन्वय (agreement) हुँदैन। अन्वयको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो तेस्रो पुरुष नपुङ्सक लिङ्गी एकवचन भन्दा हुन्छ। उदारणको लागि : बाघ आयो, उहाँ आउनुभयो। यी दुबै अवस्थामा क्रियापदको अन्तको “यो” नै छ। त्यस्तै उहाँ भन्नुहुन्छ, बाख्रा आउँछ जस्ता वाक्यमा पनि क्रियापदको अन्तमा “छ” आएको छ। यो भनेको अन्वयविहीन अवस्था हो। अर्थात सम्मान जनाउन कर्ता र क्रियापदको अन्वय प्रयोग नगर्ने, तर संयुक्त क्रियापद प्रयोग हुने तरिका हो। यस्तो संयुक्त क्रियापदमा पछिल्लो क्रिया, जसलाई सहायक क्रिया पनि भनिन्छ, जहिल्यै “हु” वा “भ” हुन्छ।
भूतकालको लागि “भ” र अभूत (वर्तमान, भविष्य) कालको लागि “हु” प्रयोग हुन्छ – भन्नुभयो, भन्नुहुन्छ। संयुक्त क्रियापदमार्फत सम्मान जनाउने अर्को संयुक्त क्रियापद पनि छ। त्यसमा दोस्रो अर्था सहायक क्रिया “बक्सी / बक्स” हो — भनिबक्सियो, भनिबक्सिन्छ। हु/भ वा बक्स सहायक क्रियापदको प्रयोगले सम्मान (honorificity) को तहलाई जनाउँछ। सामान्य सम्मानमा हु / भ, अति सम्मानमा बक्सी प्रयोग गर्ने चलन हो। पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रयोजनमा दुई तहको सम्मानको प्रयोग हराउँदै गएको छ।
२. सामान्य क्रियापद : एउटै मात्र क्रिया प्रयोग गरेको अवस्थामा यो जहिल्यै कर्ताअनुसारको अन्वय हुन्छ। नेपालीमा एकवचनमा लिङ्ग, वचन र काल सबैको अन्वय हुन्छ – खायो, खान्छ, खाई, खाए, खान्छे। कर्ता बहुवचन हुँदा लिङ्ग भेद क्रियापदमा देखिँदैन। दोस्रो पुरुषको लागि (तँ, तिमी, तपाईँ / यहाँ, हजुर) सम्मान जनाउन तिमी प्रयोग गरिएको पाइँदैन। कसैले गर्दैन पनि। तेस्रो पुरुषको हकमा सम्मान जनाउने शब्द तिनी, उनी, यिनी र उहाँ हुन्। उहाँ प्रयोग भएको खण्डमा संयुक्त क्रिया नै प्रयोग हुन्छ। तिनी, उनी, यिनी / यिन सर्वनाम र नाम नै प्रयोग भए पनि त्यसैअनुसार बहुवचनको लागि प्रयोग हुने क्रियापद प्रयोग हुन्छ — भने, गरे, खाए आदि।
स्त्रीलिङ्गीको हकमा लिङ्ग अन्वयस्वरूप, -इन् प्रत्यय सहितको क्रियापद प्रयोग हुन्छ – गरिन्, बोलिन्, भनिन्, भन्छिन्, जान्छिन् आदि। बहुवचनमा लिङ्गभेद हुँदैन। तेस्रो पुरुषमा लिङ्ग भेद गर्दा स्त्रीलिङ्गको हकमा बहुवचनको सट्टा -इन् प्रत्यय सहितको क्रियापद आउने हो।
नेपाली भाषाको प्रकृति नै यस्तै छ। जब भाषामा विकल्प छ भने कसैले कुनै एउटा छान्नु स्वाभाविक हो। प्रयोजनको दृष्टिले संयुक्त क्रियापदवाला सम्मान प्रयोग गर्ने कि सामान्य क्रियापदवाला सम्मान प्रयोग गर्ने भन्नेमा थोरै भिन्नता नेपाली भाषामा देखिन्छ। यो फरक भनेको औपचारिकताको हो। औपचारिक प्रयोगको लागि संयुक्त क्रियापदलाई प्राथमिकता दिइन्छ, भने अनौपचारिक अभिव्यक्तिमा सामान्य क्रियापद प्रयोग हुन्छ। सामान्य अवस्थामा सधैँभरि औपचारिक स्वरूप मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने कूपमण्डुकता हो। किनभने सामान्य अवस्था भनेको अनौपचारिक अवस्था हो।
एउटा रमाइलो उदाहरण नेपाली भाषामा प्रयोग भएको पाइन्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेतालाई जहिल्यै “आदरणीय” विशेषणसहित संवोधन गर्ने गरेको सुनिन्छ। तर सर्वसाधारणले त्यसो गर्दैनन्। सम्मानजनक क्रियापद, वा आदरार्थी सर्वनामको सम्वोधन प्रयोग गरेको छ भने अतिरिक्त “आदरणीय” किन थप्‍नु? तर भन्नेले भन्छन्। रहर पुरा गर्न पाउने तिनको अधिकार हो। तर सबैलाई बाध्य गर्न सकिँदैन।
अपमान गर्नु वा अनादरार्थी रूप पो प्रयोग गर्नु पो भएन त! आदरार्थीमध्ये आफूलाई सजिलो लाग्‍ने जुन स्वरूप प्रयोग गर्न पनि मानिस स्वतन्त्र छ। भाषाको स्वरूपले यो स्वतन्त्रता दिएको छ। जो त्यो मान्दैन, समझ अबुझ हो त्यो त्यसैको नराम्रो !
अशोज ३० गते, २०७६ - १२:३४ मा प्रकाशित
एमसीसीबारे बहस नै आवश्यक छैन्, नेकपाले अस्वीकार गरिसकेको हो : युवा नेता दीपशीखा
एमसीसीको पक्षमा कम्युनिष्टहरुले समेत ज्यान फालेको सन्दर्भ खतरनाक छ : लेखनाथ न्यौपाने
पहिलो महिला राष्ट्रपति र सभामुख वनाउने प्रचण्डलाई महिला विरोधी भनेर प्रचार गर्नु अर्थहिन छ : बस्नेत
बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव : इस्वी सम्बतलाई मुख्य क्यालेण्डर बनाऔं !
प्लस टु पढ्न थालिन शान्ता चौधरी, भन्छिन्, ‘सपनाहरु विपना जस्तै भएका छन् !’
श्रीमती निलमको चरित्र हत्या गरेकाेप्रति गायक ढकालकाे यस्ताे आपत्ती
राजपाप्रति बाबुरामको कडा टिप्पणी : जुठोपुरो चाट्ने लोभ राखेर मुक्ति हुन्न !
ट्रम्पले हलिउड स्टारको तस्बिरलाई आफ्नो बनाएर पोष्ट गरेपछि…
प्रचण्डलाई कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न : केपी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने, खेमराज गुरु सांसद बन्न किन नमिल्ने ?